Star Trek TNG Bluetooth, maka ndị hụrụ saga | Akụkọ akụrụngwa
N'ime afọ 90, mgbe teknụzụ amalitebeghị dị ka n'afọ ndị na-adịbeghị anya, Star Trek nọ na ejiji na ọtụtụ ụmụ klas nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ ndị na-akwado ya, nwetara ụdị nke usoro mgbasa ozi nke usoro ahụ, nke na-adịghị ka ọrụ dị ka nsonso, ọ wepụtara ụda ahụ ọtụtụ ndị na-agba n'usoro ga-amata.
Nkà na ụzụ agafeela ọtụtụ ihe kemgbe ahụ ma ugbu a, ihe ga - ewere bụ mkparịta ụka nke ụlọ ọrụ ThinkGeek ga-ebupụta na ahịa na Nọvemba. Anyị na-ekwu maka Star Trek TNG Bluetooth ComBadge, ngwaọrụ nke anyị nwere ike ịdabere na uwe elu anyị ma ọ na-eme dị ka a ga - asị na ọ bụ nkwanye.
Mana kama isoro ụgbọ mmiri na-ekwurịta okwu, anyị na-ekwurịta okwu na ama anyị. Ngwaọrụ a na-enye anyị ohere ịnara ma were oku, kwusi ma kpọọ egwu, kpọọ Siri, Google Ugbu a ma ọ bụ Cortana (dabere na ngwaọrụ ejiri jikọta ya)… Iji rụọ ọrụ ndị a niile, Star Trek TNG Bluetooth ComBadge na-etinye igwe okwu dị elu ka e wee nụ anyị nke ọma mgbe ị na-agbada n'okporo ámá. Emepụtara igwe okwu a site na Massive Audio, yabụ na ọ dị ka enwere mmesi obi ike.
Ngwaọrụ a nwere mita atọ na onye na-eduzi n'ime ọkà okwu bụ magnetik neodymium. Nzaghachi ugboro ole bụ 200 Hz na 20 KHz na ngwaọrụ ahụ nwere akara ụda dị elu karịa 80 dB. Ahụ nke baajị ahụ bụ nke ABS plastik na zinc. Na-ejikọ uwe na uwe site na iji nju.
Batrị nke ekweisi a na-enye anyị obodo kwụụrụ onwe nke oge elekere iri nke mkparịta ụka kwa ụgwọ, ana ebu ugwo site na njikọ microUSB. Nsogbu ndị ọrụ chọrọ ịnwe ngwaọrụ a bụ otu na nke ndị nrụpụta, bụ nke dị mwute taa enwetabeghị nnabata nke onye nwe ikikere Star Trek, nke nwere ike ibibi ngwaọrụ a dị egwu, nke ga-akụ ahịa , ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka atụmatụ, na November nke afọ a maka $ 79,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Star Trek TNG Bluetooth, maka ndị hụrụ saga n'anya
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na a tọhapụrụ ya?
Patch na egwuregwu maka PS4 Pro agaghị enwe ụgwọ ọzọ